Mamindra bola bebe kokoa - BS amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena »Hodges U
Miantsena Hawks Gear
Miantsena Amazon Smile
Fikarohana fandaharam-pianarana sy mari-pahaizana
Topimaso amin'ny fanamarinana
Ny mari-pahaizana diplaoma
Adihevitra momba ny fidirana
Katalaogy Mazava ho azy
Fianarana sy vola
Fomba fandefasana diplaoma
Fampahalalana momba ny mpanjifa
Sokajy: Bachelor, Business, Fanadihadiana iraisam-pirenena, Torolàlana an-tserasera, Mamindra am-pitiavana
Diplaom-pahaizana bakalorea amin'ny fandalinana Interdisiplinia
Inona ny atao hoe Fianarana iraisam-pirenena?
Ny diplaom-pianarana Interdisiplinary dia mamela ny mpianatra ampanjifaina ny mari-pahaizana miorina amin'ny filan'ny tsirairay, traikefa amin'ny fianarana, fahalianana ary talenta amin'ny alàlan'ny fampidirana ny electives miaraka amin'ny fianarana fototra takiana amin'ny mari-pahaizana bakalorea. Izy io no fandaharam-pianarana maroloko sy marefo indrindra atolotra ary iray amin'ireo taha ambony indrindra azo hamindrana trosa.
Araka ny Sekoly tsara indrindra, “Ny ankamaroan'ny fandaharam-pianarana eny amin'ny oniversite dia misy taranja takiana izay tsy maintsy raisinao, saingy mety ho hitanao fa tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra tianao hianarana na izay tianao hatao amin'ny diplaomanao ireo fampianarana ireo. Tompon'andraikitra momba ny fampianarana iraisam-pirenena, indraindray antsoina hoe maherin'ny fampianarana ankapobeny any amin'ny sekoly sasany, manasongadina taranja maro samihafa izay mamela anao hanamboatra ny mari-pahaizana ary hisafidy izay tianao hianarana. "
Araka ny LinkedIn, ny fahaiza-manao malemilemy dia ireo ilaina amin'ny fifandraisana eo amin'ny samy olona izay ahafahantsika "mahavita zavatra" ary antenaina hitazona amin'ny fangatahana be. “Ny mampiditra ny lisitr'ity taona ity dia fahaiza-mamorona, fiaraha-miasa, fandresen-dahatra, ary faharanitan-tsaina - ny fahaiza-manao rehetra izay mampiseho ny fomba fiarahantsika miasa amin'ny hafa ary mitondra hevitra vaovao eo ambony latabatra. Ny efatra amin'ireo fahaiza-manao malemilemy be fangatahana indrindra dia mijanona eo amin'ny toerana tampon'izy ireo isan-taona, manamafy hatrany fa maitso mandavantaona ireo fahaiza-manao ireo — mety hijanona ho fahaiza-manao ambony tadiavin'ny orinasa amin'ny mpiasa kintana izy ireo. ”
Ny refin-karama momba ny maha-olombelona sy ny fomba fijerin'ny asa
Ny sekoly tsara indrindra: Ny oniversite an-tserasera tsara indrindra any Florida
Sekoly mora vidy: Kolejy latina 25-taona / latina Hispanika manompo an-tsitrapo 4 mora indrindra amin'ny Internet
Ny torolàlana ho an'ny sekoly an-tserasera: 2020 Colleges an-tserasera tsara indrindra any Florida
Miaramila Times: Ny tsara indrindra ho an'ny Vets: Colleges 2020
Ivotoerana an-tserasera: Colleges an-tserasera ambony nahazo fankatoavana ho an'ny 2020
Sekoly mora vidy: Kolejin'ny bakalorea tsy miankina amin'ny Internet an-tserasera 25 miaraka amin'ny fanovana farany efa-taona
Fianarana iraisam-pirenena manokana mahafeno fepetra ny nahazo diplaoma hahombiazana!
Miorina am-pahavitrihana ny electives miaraka amin'ny mpiasan'ny Hodges U hamolavola mari-pahaizana tsara indrindra mba hahafahanao hanana fahombiazana.
Midira amin'ny fianarana azo ampiharina amin'ny tetikasa Mety ho vonona amin'ny mpianatra izany fahaizana amin'ny fikarohana, fisainana mitsikera, famahana olana na fanavaozana.
Makà kilasy voaforona mba hanomezana fahalalana vaovao izay manampy ny mpianatra Mianara mamakafaka ireo fitsipi-pifehezana amin'ny zava-bita.
Mianara momba ny fahaiza-manao fototra toa ny Fanentanana momba ny fanentanana sy ny fahasamihafana manerantany, manome ny fototra hahatakatra sy hanaja fifehezana maro.
Ny BS Interdisciplinary Studies dia mety hanomana anao amin'ny fanabeazana ho avy, toy ny a Diplaoma maîtrise or Mari-pahaizana licence.
Hodges dia manome anao mila fitoviana
Hodges U dia manolotra faritra dimy manan-danja indrindra: Fianarana ankapobeny IDS; Fianarana samihafa, fitoviana, ary fampidirana; Fianarana momba ny fitantanana; Fianarana ara-dalàna; na Famolavolana nomerika sy sary.
Safidy mety ho an'ireo mpianatra mikasa ny famindrana. Mba miangavy re Mifandraisa amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny fidirana an-tserasera hiresaka momba ny fahazoana mampindram-bola.
haingana mianatra amin'ny alàlan'ny daty fanombohan'ny kilasy isam-bolana.
Hodges University dia eken'ny Ny Fikambanan'ny Southern Colleges sy ny Sekoly any am-pianarana.
Hodges University Anisan'izany Diplaom-pianarana bakalorea tsara indrindra an-tserasera 2019 any Florida.
Miomàna amin'ny toerana any an-tsaha toy ny:
Fitarihana sy fampandrosoana ny fiaraha-monina
Fianarana momba ny kolotsaina sy ny tontolo iainana
Misafidiana diplaoma azo ovaina natao ho anao!
Aza miandry, Ampiharo Androany!
BS amin'ny seha-pianarana diplaoma momba ny fampianarana iraisam-pirenena
Mikaroha ny fandaharam-pianarantsika
Robyn Crawford: Mpianatra nahazo diplaoma amin'ny fampianarana an-tsekoly nahitana fahombiazana teo amin'ny sehatry ny lalàna
Hodges dia tohatra iray an-dàlana hanatratra ny tanjoko faratampony ho mpisolovava. Ny fahalalana azoko nandritra ny diplaomako bakalorea dia manohy manampy ahy amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan'ny samy olona amin'ny asako sy ny fahazoako ny hafa, izay fahaiza-manao manan-danja amin'ny laharam-piasako. Ny zava-bitako lehibe indrindra dia noho ny fanampian'ny Oniversiten'i Hodges dia afaka ny ho tonga mpisolovava nahazo alalana tamin'ny faha-20 taonako aho!
Manomboha amin'ny # MyHodgesStory anio.
Tohano Hodges U Rehefa miantsena Amazon ianao!
Tsindrio ny rohy etsy ambany rehefa miantsena any Amazon ianao ary manome ampahany amin'ny fividiananao amin'ny tahiry Hodges Hawks!
© Copyright Hodges University 2018-2021 | politika Fiarovana fiainan'olona | Fampahalalana ho an'ny mpanjifa | Ny Anjerimanontolon'i Colleges sy ny Komisiona momba ny oniversite any Hodges dia neken'ny faritra ho an'ny oniversite Hodges hanome mari-pahaizana diplaoma, bakalorea ary bakalorea. Raha mila fanontaniana momba ny fankatoavana ny Oniversite Hodges dia mifandraisa amin'ny Commission on Colleges ao amin'ny 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 na miantso (404) 679-4500. Ny fangatahana hafa rehetra momba ny programa fanabeazana ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, ny fepetra takiana amin'ny fidirana, ny fanampiana ara-bola, sns., Dia tokony halefa any amin'ny University of Hodges fa tsy any amin'ny South Association of Colleges and Schools Commission on Colleges. Ny fandaharam-pianarana isaky ny fandaharam-pitsaboana ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia mahafeno ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana ara-pahaizana any amin'ny fanjakan'ny Florida. Ireto fandaharam-pitsaboana ireto dia misy ny Master of Science amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana, ny mari-pahaizana momba ny siansa amin'ny mpitsabo mpanampy, ny mpiara-miasa amin'ny siansa amin'ny mpanampy amin'ny fitsaboana ara-batana, ny mari-pahaizana momba ny teknisiana momba ny fitsaboana vonjimaika, ny mari-pahaizana momba ny paramédicaux ary ny mari-pahaizana momba ny mpitsabo mpanampy. Ny Hodges University dia tsy nanapa-kevitra raha ny programa, voalaza etsy ambony, dia mahafeno ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana matihanina any amin'ny fanjakana hafa. Ireo mpianatra mikasa ny hifindra toerana ivelan'ny Florida dia tsy maintsy manamafy fa mahafeno ny fepetra takian'ny fanjakana ny fandaharam-pianarana.
Mampiasa cookies sy fitaovana fanangonana angona hafa izahay mba hamoronana ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra, hahafantaranay bebe kokoa ny fomba ampiasana azy ireo, vangio ny pejinay momba ny fiainana manokana. Raha manohy mampiasa an'ity tranokala ity ianao dia manome anao ny fanekenao hanao an'io. Hatramin'ny ohatry ny lalàna momba ny fiarovana ny angona ankapobeny ("GDPR") no ampiharina amiko, amin'ny fitsidihako an'ity tranonkala ity dia manaiky aho ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana araka ny voafaritra avy amin'ny GDPR ho an'ireo tanjona voatanisa sy voatondro ao amin'ny politikan'i Hodges, izay nasiam-panitsiana indraindray. Fantatro fa amin'ny toe-javatra sasany, dia manan-jo hanohitra ny fanodinana ny Data-ko manokana aho. Azoko bebe kokoa fa manan-jo hangataka (1) fidirana amin'ny Data-nao manokana aho; (2) fanitsiana ny lesoka na lesoka ary / na ny famafana ny angon-drakitrao manokana; (3) izay Hodges mametra ny fikirakirana ny angon-drakitrao manokana; ary (4) fa i Hodges dia manome ny Data momba ahy manokana arakaraka ny fangatahana amin'ny endrika azo entina.